I-PropBase - # 1 Setha i-Database ye-Costume Prop ye-Theatre Movie | Plum Amazing
I-PropBase - Sets, Props, Database Yezimpahla
Qeda isiphithiphithi. Uhlelo lokuhamba komsebenzi olunamandla nolunobuchwepheshe lokusebenzisa isitudiyo esihambisanayo, itiyetha noma indawo yokukhiqiza
Isizindalwazi esinamandla kakhulu nesobuchwepheshe sokuhlela
1. I-PropBase - ivumela inhlangano enenani elikhulu lama-props kusuka emidlalweni, kuma-movie, njll ukugcina ithrekhi yokusungula kwayo, ukuqasha noma ukuboleka, i-invoyisi, ikhodi yebha, ukungena / ukuphuma, ukwenza ukubalwa kwezimali, ukulandelela, ikhodi yebha / Ukuphrinta ikhodi ye-QR nokuskena usebenzisa izikena zamazinyo eziluhlaza nokuningi. Ngale database kungasethwa izakhiwo zaseshashalazini zokugcina izwe lonke. Kungani amasethi, ama-props nezingubo zokugqoka zika'Peter Pan 'noma' uFiddler on the Roof 'kudalwe kaninginingi unyaka nonyaka? Gcina imali, usebenzise kabusha izinsiza zokugcina impahla, amasethi, nezimpahla zokugqoka. Yabelana noma uqashe izinsiza namasethi. Bakhiphe ngemvume uphinde ubasayinde bangene ngemvume. Okuhle kunakho konke ukuthi ungakuthola ngokushesha. Lawa ama-props futhi asetha i-database yomkhakha weshashalazi nowama-movie. Futhi uhlelo lolimi, izikole eziphezulu kanye namanyuvesi.
2. Isizindalwazi Sokuqasha Izinsimbi Zevidiyo (VERD) - Le database ewusizo kakhulu ezinkampanini ezinenqwaba yamakhamera (i-video futhi namanje), ukukhanyisa, izinsiza, amakhebuli, imishini yomsindo, neminye imishini eyahlukahlukene eqashwa isikhathi esifushane nesikhathi eside. Le database ivumela inkampani yokuqasha imishini yevidiyo ukuthi isungule, iqashe, ifake i-invoyisi futhi ilandelele imishini kuzo zonke izinyathelo zenqubo. Ivumela ukwenza ukuqasha ngokushesha, ngokungaguquguquki nangokusebenza kahle.
Kokubili yolwazi kususelwa kulwazi oludumile futhi olusebenziseka kalula kepha olubanzi lweFayilemaker lweMac, Win, iOS, Android & Web. Ziqalise kusuka kuwebhu ukuze usebenze kuwo wonke amadivayisi. Njengoba ukhula futhi nezidingo zakho nempahla yakho kukhula, i-database ingakhula.
Iningi izinhlelo ezinkulu zemininingwane egciniwe etholakalayo thatha indlela "eyodwa ifanela konke" edinga amakhasimende ukuthi aguqule izinqubo zawo kwisoftware. Sithole ukuthi izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi eziqashisayo kaningi zinemodeli yazo eyehlukile yebhizinisi.
Quote Isizukulwane Esilula
Tracking Ukulandelela Okunamandla Kokusungula
Ukuphrinta nokuskena kwekhodi ye-Bar ne-QR
Ipulatifomu ye-Cross - Windows, Mac, iOS, Android neWebhu.
The Uhlelo Lokuqasha kufaka phakathi ikhono lokuphatha amaklayenti noxhumana nabo, ukudala izingcaphuno eziqashisayo ngokukhipha okuzenzakalelayo kwama-oda womsebenzi wokuxhuma kanye nama-invoice, i-imeyili edidiyelwe yezilinganiso zokuqasha kanye nama-invoyisi, ukuphathwa kwempahla okubandakanya ukuqoqwa okuguquguqukayo kwezinto zempahla kanye nokulandela umkhondo okuhlanganisiwe "okulahlekile nokulimazekile" futhi ukubika.
Sizokwenza ngokwezifiso iPropBase ngokwezidingo zakho. Amahora ayishumi okuqala amahhala:
the ukuphathwa kwempahla inqubo kufaka phakathi i-bar-coding
I-PropBase yakhiwe / yahlelwa ku-Filemake okulula kakhulu ukusebenzisa futhi i-database enamandla kakhulu esebenza ku-Mac, Win, iOS, Android nakuwebhu
Inkampani Yenzuzo $ 3000 I-PropBase namahora ayi-10 wokwenza ngokwezifiso / ukwesekwa mahhala
Inkampani Yeshashalazi $ 2000 I-PropBase namahora ayi-10 wokwenza ngokwezifiso / ukwesekwa mahhala
Imfundo noma Okungenzi Nzuzo $ 1500 I-PropBase namahora ayi-5 wokwenza ngokwezifiso / ukwesekwa mahhala
Izinketho Ngemuva kwamahora wokuqala we-10 wokuqala bese lezi zinketho.
Ukwenza ngokwezifiso / uHlelo $ 150 / ihora Kuze kube ngamahora angu-9 ngokwezifiso. (kuthengiwe ngaphambili)
Ukwenza ngokwezifiso / uHlelo $ 125 / ihora Ngamahora ayi-10 kuye emahoreni angama-49 ngokwezifiso (kuthengiwe ngaphambilini)
Ukwenza ngokwezifiso / uHlelo $ 100 / ihora Ngamahora angu-50 noma ngaphezulu ukwenza ngokwezifiso (kuthengiwe ngaphambili)
Ukusekelwa kwe-Tech $ 250 / ngonyaka Ukuxhaswa (i-imeyili / ukwesekwa kwefoni nokulungiswa kwamaphutha) (kuthengiwe ngaphambili)
Ukunyuka kwedatha $ 250 / isibonelo
Kudinga ukuhlelwa kwesikhathi sokuvuselela ifayili. (ukuthenga kwangaphambili, njengoba kudingeka)
Ukuthuthukiswa Okuncane Mahhala Akubandakanyi ukuthuthwa kwedatha uma kudingeka
Imininingwane egciniwe yempahla yasesiteji, imvunulo, amawigi, iyunifomu, ukukhanyisa, amasethi, njll.
Xhumana nathi ngemibuzo ye-demo yamahhala.